Sim Card ဘယ်လိုပွားမလဲ — MYSTERY ZILLION
Sim Card ဘယ်လိုပွားမလဲ
July 2009 edited December 2010 in Other
Sim Card ပွားနည်းများသိရင်ေ၀မျှပေးပါခင်ဗျာ.
pwagyii wrote: »
China မှာတော့ sim clone drive တွေ၀ယ်လို့ရတယ်။ 10$ လောက်ဘဲရှိတယ်ဗျ။ :P:P:P
အာ... ဖမ်းလို့ရတာပေါ့။ ကြိုးမဲ့ကြေးနန်းဥပဒေရှိတယ်။ အဲဒါနဲ့အရေးယူတယ်ဗျ။ ပြီးခဲ့တဲ့အပါတ်ကလားမသိဘူး၊ အင်တာနက်ဂျာနယ်ထဲမှာပါတယ်လေ။ အရေးယူတဲ့အကြောင်း။:65::65::65:
ဖမ်းလို့ရလား မမေးနဲ့...။ Clone ၀ယ်ပြီးရင် မြန်မာ နိုင်ငံ သယ်လာကြည့်ပေါ့ဗျာ... သိရလိမ့်မယ်...
ကျနော် ဒီကိုမလာခင်အထိတော့ သုံးနေတာလေးတွေ တွေမိသလားလို့ :d:d
အကို့ လက်ကောက်၀တ်ကို အရင်နမ်းကြည့်လိုက်အုံးဗျ
Sim Card ပွားနည်းကို တကယ်သိချင်ကြရင်
တကယ်လုပ်ဖူးတဲ့Professional တယောက်နဲ ့မိတ်ဆက်ပေး ပါရစေ ။
အဲ ့ဒီလူက အခု လောလောဆယ် အင်းစိန်မှာနေပါတယ် ။
ကဒ် ပွားတဲ့ ကိစ္စ ကိုအကောင်းဖတ်ကကြည့်မယ် ဆို ရင်...
အဲလိုပွားနိုင်တဲ့နည်းတွေ ကိုလူတိုင်းကိုယ်စီသိကြပြီ ဆိုကြပါတော့....ကာကွယ်တဲ့နည်းတွေ လဲ ပေါ်လာ မှာပါ....ကျနော် တို့ ဆီမှာ က နည်းပညာတွေ အရမ်းအားနည်းနေသေး တယ် ဗျာ...ရှိတဲ့ပညာတွေ ကို ဖြန့်ေ၀ကြစေချင် တယ်...တခြားနိုင်ငံတွေ မှာ ကဒ်ပွားလို ့ရနေကြပြီ ပဲ..ဒါပေမယ် ့သူတို့ဘာလို့မပွားကြတာ လဲ.....ဒါစဉ်းစားစရာတခုနော်...နည်းပညာတွေသာ တို့တက် လာ ပြီ ဆိုရင် ဒါတွေ အလိုလို ပျောက် ကွယ် သွားမှာ ပါ...ဒါကြောင့်နည်းပညာတိုးတက် ရေး အတွက် ပဲ ကြည့်ပြီး ကျနော် တို့တွေ မျှ ေ၀ကြပါစို ့......ကျနော် ့ဆီမှာ...satellite receiver အချင်းချင်း channel ကူးတာတွေ ..မိမိဓါတ်ပုံတွေကို ထည့်နိုင် တဲ့..ဆော ့၀ဲလေးတခုရှိပါတယ်...ကျနော်နောက် ရက် ကို တင် ပေး ပါ့ မယ်...
soe gyi wrote: »
နည်းပညာတိုးတက်တာနဲ ့မဆိုင် ကတ်စျေးနဲ ့ပဲသက်ဆိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို ့ဆီမှာသာတစ်ကတ်တစ်ဆယ်နဲ ့ဆိုပြီးသာ ပဲပြုတ်ရောင်းသလို ရောင်းနေရင်ဘယ်သူကပွားဦးမှာလဲဗျာ
နိုင်ငံခြားမှာ sim ကို copy လုပ်မလုပ်တော့မသိပါ။ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအားလုံး sim card စျေးက ကြိုက်တဲ့လမ်းဘေးဆိုင် (711) လိုဆိုင်မျိုးမှာ တစ်ကဒ် us15$ လောက်ဆို၀ယ်ရင်
us10$ လာဖိုးပြောလို့တောင်ရပါပြီ ကဒ်ကို (prepaid) ထည့်ချင်ရင် us10$ ကဒ်၀ယ်ရင် ဂဏန်း
၂၄ လုံးပါတဲ့ prepaid card ကို ရိုက်ထည့်ရပါတယ် ။ ဖုန်း ၂ လုံး ၃ လုံးလောက်ကို အဲဒီနံပါတ်အတူတူရိုက်ထည့်ပြီး နောက်ဆုံး # နှိပ်ခိုင်းတဲ့အချိန် တပြိုင်နက်တည်း ရိုက်ရင် အတူတူနှိပ်မိတဲ့ဖုန်းတိုင်းကို prepaid add လုပ်ပေးပါတယ် စမ်းကြည့်ပါ။ text msg ဆို ကုမဏီတွေကအပြိုင် အလကားနှုန်းပို့လို့ရပါတယ်။
ထောက်ခံလိုက်ဦးမယ်...:D မလေးရှားမှာဆိုရင်လည်း SIM Card တခုရဲ ့တန်ဖိုးက ဆိုင်မှာထမင်းတနပ် ၀ယ်စားတဲ့တန်ဖိုးနဲ ့အတူတူလောက်ပဲဗျ။ SIM တခုကို ရင်ဂစ် ၈.၅၀ နဲ ့၀ယ်လို ့ရြ့ပီး အဲဒီ SIM ကတ်ထဲမှာ ငွေက ၄ ရင်းဂစ်ပါသေးတယ်ဗျ။ မြန်မာငွေနဲ ့ဆိုရင် ပျမ်းမျှ ၂၇၀၀/-လောက်ပဲကျတယ်..ကဲ..ဘယ်သူကအားအားယားယားပွားနေဦးမှာလဲ..ဗျာ.:P:P:P
အဲဒီဟာ ပွားတာကိုကျွန်တော် တရုတ်ပြည်မှာတွေ့့ဖူးတယ်။ သူတို့့ ကဒ်တစ်ကပ်ပွားရင် တရုတ်ငွေ 1000 လောက်ကိုတောင်းတယ်။ လိုချင့်ရင်တော့သွားလိုက်ပေါ့
ဒါပေမယ် ဒီဖုန်းပွားထားတာတွေကို နယ်ခြားပြီးသုံးမိရင် ဆက်သွယ်ရေးကသိတယ်။အဲဒါဆိုရင်ဖုန်းပြန်သိမ်းလိုက်လိမ့်မယ်။ တစ်မြိုု့့နယ်ထဲဆိုရင်တော့ရတယ်။ ။ ။
ဟဲဟဲ လက်ထိပ်နဲ့တော့နီးတယ်။ ။ ။
satellite receiver အချင်းချင်း channel ကူးလို့ရတဲ့ software လေးပေးနိုင်မလားအကို။
ဟုတ်တယ်. ကြိုးမဲ့ ကြေးနန်းဥပဒေအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၆(၁) လို့တော့ ပြောတယ်..
Cellular ဆိုရင် ကော code က ဘယ်နာ ရိုက်ထည် ရမလဲ
July 2010 edited July 2010 Moderators
အင်း ... ဟုတ်တော့လည်းဟုတ်သား! အခုကတ်ပွားတာတွေဖြစ်နေတာက GSM sim တွေက စျေးအရမ်းကြီးလွန်းတာကိုး .. နောက်ပြီး ဖုန်း Bill ကလည်းရှိသေးတယ်.. နိုင်ငံခြားမှာဆို Bill ဆောင်စရာမလိုဘူးထင်တယ်.. ၀ယ်သွားလိုက် .. တစ်ခါတည်းဖုန်းပြောလို့ရတယ်.. Bill လည်း ဆောင်စရာမလို .. ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ ... ပေါလည်းပေါတယ်... အဲ့တော့ ပွားစရာမလိုဘူး .. အဲ ... သူတို့လုပ်တာက သူများဘာပြောလဲ နားထောင်လို့ရအောင် ဖုန်းပြောတာကို ခိုးနားထောင်လို့ပဲရအောင် လုပ်တာပဲလေ.. အဟတ်
As far as I know, we can't listen what other are speaking by cloning SIM Cards. You must buy some kind of special GSM sniffer to do this. These devices are quite expensive (~ over 5000 USD) and only Governments and Agencies get the right to buy it. But please let me know if you know or heard of any way to achieve it in cheaper way.
sim card ပွါးဖို့ ကြိုးစားကြည့်တာ အဆင်မပြေတာ တွေ့ရတယ်ဗျ
sim card ကို sim card reader ထဲထည့်လိုက်တယ် ကွန်ပျူတာ မှာလဲတပ်လိုက်တယ်
sim reader က win7နဲ့ vista မှာလုံးဝအလုပ်မလုပ်ဘူးဗျ
xp မှာတော့ သုံးရတယ်
siim card clone လုပ်တဲ့ software တွေကလဲ အွန်လိုင်းမှာ ရှာကြည့်တာ အလကားမတွေ့ဘူး
ကျနော် ဒေါင်းထားတဲ့ sim card manager ကလဲ sim card ထဲမှာပါတဲ့ ဒေတာ အကုန်မပြဘူး
message တို့ ဒေတာတွေ ဘာတွေ့ backup လုပ်လို့ရတာပဲရှိတာ
sim card code ကိုလှမ်းကြည့်ချင်တာ မရဘူးဖြစ်နေတယ်
sim card reader ကိုဝယ်တာကတော့ တရုတ်ကိုဆိုင်ကယ်သွားချတဲ့ လူတွေဆီကနေ မှာလိုက်တာပဲ
မန္တလေး နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် မှာအသိရှိရင် ဝယ်ခိုင်းရင်အဆင်ပြေမယ်
December 2010 edited December 2010 Administrators
First you'll need the IMSI (International Mobile Subscriber Identifier) number. This string of numbers is usually imprinted on the SIM card itself. This is an example of an IMSI number:
Now you have your IMSI number you'll need the authentication key (Ki), which is unique to your SIM. This number can only be discovered electronically usingaSIM duplicator, which is an external device that you will slot the SIM card into.
When the SIM duplicator is connected to your PC and your SIM card, it will attempt to acquire the Ki number and copy the entire contents. Whenanew SIM card is placed into the duplicator after this process is complete, that data will be copied and, for all intents and purposes, the new SIM will be identical to the old.
Read more: How to CloneaSIM Card | eHow.com (http://www.ehow.com/how_4770451_clone-sim-card.html#ixzz180Kcu9uu) http://www.ehow.com/how_4770451_clone-sim-card.html#ixzz180Kcu9uu
Read more: How to CloneaSIM Card | eHow.com (http://www.ehow.com/how_4770451_clone-sim-card.html#ixzz180Jy8O8f) http://www.ehow.com/how_4770451_clone-sim-card.html#ixzz180Jy8O8f
December 2010 edited December 2010 Registered Users
ဟဲဟဲ လိုချင်လား တရုတ်ပြည်ကိုသွား လိုက်ရှိတယ်။။။။။။။။။
ဒါပေမယ့် channel မတူတဲ့ နေရာမှာသာ သုံးမိရင် သွားပြီ။
Hand Chain လေ
October 2017 Registered Users